यी १२ देश जहाँ अहिलेसम्म देखिएन कोरोनाभाइरस | Ratopati
सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा कोरोनाभाइरस चीनमा मात्र सीमित रहेको देखिन्थ्यो । तर, केही हप्ताको अन्तरमा नै यो वैश्विक महामारीमा परिणत भयो ।
भाइरसका कारण श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिने यो रोग पछिल्लो गणनाअनुसार १ सय ८८ देशमा फैलिसकेको छ । वैज्ञानिक, स्वास्थ्य अधिकारी र सरकारले विश्वभर आफ्ना नागरिकहरुलाई समाजिक दुरी कायम राख्न र काम नपरेसम्म बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५८ लाख मानिस भाइरसबाट संक्रमित बनिसकेका छन् भने ३ लाख ६० हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसमध्ये २४ लाख मानिस निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
तर, केही देशहरुमा भने अझै कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । ती देशहरु रहेका छन्ः
२. मार्सल आइल्यान्डस्
८. सोलोमोन आइल्यान्डस्